YunoHost kugovera kukwirisa yako wega server pane yako Raspberry Pi | Linux Vakapindwa muropa
YunoHost kugovera kukwirisa yako wega server pane yako Raspberry Pi
yunohost iko kugoverwa kweLinux kunobva paDebian yakarongedzwa yemahara software iyo inogadzira kuiswa kwe wega webhu server.
Chinangwa cheYunoHost ndechokubvumira vashandisi kubata zviri nyore yavo yewebhu masevhisi nekugonesa iri nyore webhu interface nongedza uye tinya kuti uise akawanda webhu kunyorera.
Parizvino zvinotsigirwa zvinoshandiswa zvinosanganisira email server ine webmail interface, webhusaiti yeWordPress, server yekutumira mameseji, inosanganisa nhau, faira rekugovana faira, uye bhokisi rembeu, pakati pevamwe.
Imwe yehunhu hweYunoHost iyo yakabata pfungwa yangu ndeyekuti ine vhezheni yeRaspberry Pi.
Saka iwe unogona kuzviratidza wega sevha nerubatsiro rwekuparadzirwa kweLinux uye chako chidiki kifaa.
Yunohost Inosanganisira nginx web server, MariaDB, iyo Postfix tsamba yekumisikidza mumiririri, uye iyo Dovecot IMAP server, kusanganisira iyo Rspamd spam firita.
Metronome IM XMPP server, OpenLDAP, Dnsmasq, uye SSOwat inojekesa sisitimu yekusimbisa yekusaina kamwe chete iripowo, sezvakaita Ngatinyorwei kugadzira zvitupa zveSSL.
YunoHost inopawo nharaunda inochengeterwa magwaro akabatsira ekuisa mamwe masevhisi nemaapplication.
Iyo yekuchengetera, iyo inogarwa paGitHub, inopa yakasarudzika mavhezheni eakafanogadzirirwa maficha ekubatanidza muYunoHost imwechete kusaina-pane nharaunda.
Kugovera inopa zvimwe zvinyorwa zvine basa rekugadzirisa izvo zvinodikanwa kuti iite basa rayo, iro ratinogona kutaura nezvaro:
Imwe LDAP server kubata vashandisi vakawanda
A yakazara email server
Iyo XMPP meseji yekutumira mameseji
Kubatanidzwa neRegedza Encrypt kuti ive nyore HTTPS
Anoshanda maneja, inokwanisika uye inoshanda mune mashoma mashoma.
Mukuwedzera kune akateedzana ezvishandiso zvinoita kuti zvive nyore kuchengetedza zvese, gadzirisa vashandisi uye nekuteedzera matsva, kungave pamutsetse wekuraira kana kuburikidza newebhu webhu, iri nyore uye inokodzera zvidiki zvidiki.
1 Chii chitsva mushanduro 3.3
2 Maitiro ekuisa YunoHost pane Raspberry Pi?
Chii chitsva mushanduro 3.3
Iyo kugovera iri mune yayo vhezheni 3.3 iyo iyo iyi vhezheni inopa mushandisi nyowani yekushandisa manejimendi manejimendi.
Uye zvakare, vhezheni 3.3 inopa nyowani yekushandisa manejimendi manejimendi kumutungamiriri:
Nyowani yekushandisa manejimendi peji.
Yakanga yatove yakapusa usati waisa kana kusabvisa chishandiso.
Asi isu tinofanirwa kuziva kuti, zvakaburitswa zviri pamutemo zvikumbiro, iwo mhando yemhando yemapakeji haana kuenzana.
Ruzivo rwehunhu hwemapakeji ikozvino rwashumwa zvakajeka.
YunoHost inoisa mhando dzemhando dzakatangira pa "package iripo, asi hapana chinoshanda" kune "zvese zvinoshanda", kusanganisira mabhakuki.
Yakagadziridzwa manejimendi manejimendi
Izvo zvaigoneka kuve ne admin password (yeiyo admin interface) uye rakasiyana mudzi password, ikozvino ivo vari mukuenderana.
Zvinogona kusavandudza chengetedzo pachayo, asi zvinoita kuti zvinhu zvisanyanye kuvhiringidza kune vashandisi vasina kujaira mashandiro emukati.
Uyewo, Kurambidzwa kwakasimba kwakawedzerwa pamapassword akasiyana akatsanangurwa muYunoHost (maneja, vashandisi, zvishandiso ...).
Metronome default marongero
Metronome ikozvino vhezheni 3.11 muna Gumiguru. Asi, iyo yakasarudzika metronome yekumisikidza template yakanga isati yasvika parizvino (ngatirangarirei zvakare kuti chinangwa cheYunoHost ndechekurerutsa hupenyu hwemutungamiriri uyo asingachadi kubaya mafaira ekumisikidza).
Zvizhinji zvezvinhu zvinopihwa neMetronome zvakange zvisina kugoneswa nekukanganisa, ivo vava izvozvi.
Maitiro ekuisa YunoHost pane Raspberry Pi?
Kugona kuseta yako sevha neYunoHost pane yako Raspberry Pi, iwe unofanirwa kurodha iyo system mufananidzo, izvo zvino zvinokutungamira kune inotevera chinongedzo.
Kamwe kurodha pasi kwaitwa, iwe unogona kusevha iyo mufananidzo nerubatsiro rweEtcher pane iyo SD kadhi kuti gare gare utange iyo system pane yako Raspberry.
Kana izvi zvaitwa iwe unogona kuenderera mberi kuti uite marongero anodikanwa, iwe unogona kuteedzera iyo dzidziso yakapihwa nevavaki mune iyi link.
Ehezve, kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako iwe unogona kugara uchishandisa Adjenet maseva kudzivirira maitiro ese ari pamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » YunoHost kugovera kukwirisa yako wega server pane yako Raspberry Pi
OwnCloud inovandudza magumo-kusvika-kumagumo kunyorera
Cisco yakaburitsa vhezheni itsva yeantivirus ClamAV 0.101.0